I "Halfway" - A Self-Ukulinganisela Isithuthuthu ndingqinayo kuni ngayo - Jomo Technology Co., Ltd
I "Halfway" - A Self-Ukulinganisela Isithuthuthu uthatha kuyo
Le Koowheel Electric self balancing scooter E1 ulula kodwa sinamandla, lomenzi Innovative uyilo nendlela epholileyo, LED isikrini kubonisa ngokupheleleyo ibhetri nesantya, super shoka yokufunxa ngerabha 8inch ivili ukuyilandela. Ngaphandle, isongiwe yodwa kwaye enze lula. Nangona kunjalo, ingaba ukunika amandla efana kunye nozinzo njengoko lukhona nge oyile eliphezulu-entanjeni. Isiqu ezisenokwandiswa, kulungile zombini kids kunye nabantu abadala.
Ngaphezu koko, elinye Rubber best yombane Kwandile iphenjelelwa kwiintlawulo eziyimfuneko ukuze agidime nkqi ingubo esahlukanayo elide kwaye kufuneka ubulungeleyo ekhwele phezu kumathambeka kakhulu. Isantya behamba kwi Kuya, nangona kusenokuba ukufikelela max zesantya 42 km ngeyure.
Ukuba ufuna ukuthenga yombane isithuthuthu ukutyiwa yakho ngamnye, lo E1 ibe olunoqoqosho ngokwenene kunye namava luncedo kuwe yaye nabani na nabo ubathandayo. Enoba kakhulu lento ukuhlawula, ukuba phantse ukukholelwa ukuhlangabezana uhlobo ingozi yomlilo axwile into (okanye hayi babonisele) ngaphakathi naliphi isithuthuthu. Ngoko ke, ngaphantsi enzima mvula, ukuba kububulumko nje ukuba chu, ugcine kude izadunge. Kodwa xa kuthelekiswa ibhodi yenza, i E1 kukho tag exabisa mnandi ngokwenene beengxenye sayo - nto engaphezulu, akukho ngaphantsi. Iibhayisekile asetyenziswa nje ngeenjongo zokuzonwabisa ke ukuba kwizithuthi - ukusebenza, ukuya umthengisi sinokuya, yintoni na wena ngonaphakade. Ndzi kume ngaphezu yaye awesome phantse-sunset skate. Eyokuqala iyachiza ngesantya kakhulu 16mph, kanti akwazi ukuya 22kmh. Usenokuba kuba ingqiqo kwemida nangokuhamba Harley omncinane.
ixesha Post: Apr-20-2018